Fanaterana haingam-pandeha ny milina fanodinana milina | PTJ Hardware, Inc.
Home > Momba anay > Delivery
▶ Andalana fonosana manokana
Ao amin'ny ozinina PTJ, ny fandaharam-potoana fanaterana akora sy ny fizotran'ny famokarana dia tantanana amin'ny alàlanay namboarina ERP rafitra fanaraha-maso asa mba hiantohana ny fandefasana ara-potoana ny mpanjifa.
Lava fonosana manokana hatramin'ny 10 metatra.
Raha be indrindra, misy mpiasa 12 fonosana vita tanana
▶ Fiantohana kalitao
Mampiasa namboarina izahay satria io no rindrambaiko be mpampiasa sy azo atokisana indrindra natao manokana ho an'ny mpanamboatra manokana, fivarotana asa ary fivarotana teknolojia avo lenta. Ny fampahalalana momba ny asa rehetra dia tafiditra ao amin'ny rafitray isaky ny manomboka ny baikon'ny mpanjifa tsirairay. Ny fizotrany rehetra dia arahana amin'ny alàlan'ny fandefasana mba hahazoana antoka fa feno ny datin'ny fanoloran-tena.
▶ Fanaraha-maso Inventory
Manana mihoatra ny folo taona ny fiaraha-miasa amin'ireo mpamatsy, ary avo ny vokatra famokarana. Ny ampahany amin'ny milina CNC dia inventories amin'ny ankapobeny, afa-tsy ny ampahany manisy tombo-kase.
Ny fitehirizana fitaovana sy ny santionany ary ny fisoratana anarana amin'ny faritra CNC dia hapetraka eo amin'ny talantalan'ny trano fitehirizana.
Na izany aza, ny backup ny santionany sy ny vokatra hafa alefan'ny mpanjifa dia hosoratana anarana ary ampiasaina hanomanana ny mpanjifa amin'ny fisokafan'ny baiko manaraka.